Horudhaca waxqabadka alaabta
Beijing Wistron Technology Ltd. Qalabka Gaadiidka Co., LTD. soo saara barafka cadceedda waddada iyo indhaha bisadaha LED -ka cadceedda ayaa iftiimiya Koonfur -bari Aasiya. Warshadaha baraha cadceedda ee Wistron waxay gacan ka geystaan ​​yareynta tirada shilalka waddooyinka iyo dhimashada qaar ka mid ah waddooyinka dhimashada ee gaarka ah. Teknolojiyadda Wistron ee Beijing ...
Sida loo rakibo usha qorraxda waddooyinka
Shaqooyinka iyo meelaha isticmaalka baraha qorraxda ee waddooyinka ayaa kala duwan. Ku rakibidda baraha cadceedda waddada waxay u baahan tahay tallaabooyinka diyaarinta ee soo socda. Marka hore, u diyaari qalab lagu rakibo baraha qorraxda waddooyinka. Aaladaha loo baahan yahay si loo rakibo baraha cadceedda ee waddooyinka ayaa ah: wheel wheel and markker, cabbirka xudunta, daloolinta xudunta, ...
Xusuus -qorka Tilmaan -bixiyaha oo ku Saabsan Kharashka Waddooyinka Waddooyinka Cad ee Solar Cat
Waxqabadka waqtiga habeenkii oo buuxa oo ah hawlgalka waddada bisadda cadceedda cadceedda (200+ saac oo aan joogsi lahayn-iyada oo aan la sii gaadhsiin iftiinka maalintii) lama gaadhi doono ilaa laga dhammaystiro dibedda. Waqtigan xaadirka ah ee soo -gaadhista bannaanka, awoodda kaydinta weyn ayaa markaa awood u siineysa ...
waa maxay farqiga u dhexeeya caag ama alwaax alwaaxyada?
• Alwaaxyada Aluminiumku waa ka cimri dheer yihiin waxayna leeyihiin cimri dheer cimilada caagga ah. • Qiimaha alaabta ceeriin ee aluminiumku wuu ka sarreeyaa kan caagga ah marka la eego qiimaha wax iibsiga. Sidaa darteed, qiimaha birta aluminiumku wuxuu 40 % ka qaalisan yahay caagadda caagga ah ee cabbirrada la midka ah. • Caag ...